Mijinja ny nafafy | NewsMada
Par Taratra sur 15/06/2017
Misasaka ny taona 2017 ! Fotoana hiomanan’ny mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana, santarin’ny CEPE amin’ny 20 jona ho avy izao. Voalaza fa mety ho ity no hanaovana ity fanadinana ity farany, fa ho foanana amin’ny taom-pianarana 2017-2018. Raha ny vanim-potoana ankehitriny, tsy manan-danja firy intsony ity diplaoma ity na tsy milaza mivantana an’izany aza ny fanjakana, fa dia hoe hitarina ny faharetan’ny ambaratonga voalohany. Mandrapahatonga an’izany, hijinja ny vokany ny mpianatra, nafafy nandritra ny sivy volana mialoha.
Fotoana hidirana amin’ny vanim-potoana ririnina koa izao. Fanomanana ny taninketsa ho an’ny tantsaha mamboly varialoha. Ratsy ny vokatra tamin’ny taom-pambolena farany teo amin’ny ankapobeny, vokatry ny tsy fahampian’ny rotsak’orana, indrindra ny any Alaotra sy ny aty afovoan-tany. Ara-bakiteny, hijinja ny afafiny ny tantsaha amin’ny manodidina ny faran’ny taona. Tsy miankina amin’ny mpamboly ny lalàn’ny toetr’andro sy ny natiora, saingy tokony hikaroka ny vahaolana hiatrehana izany izy ireo satria efa miantoka ny aim-pirenena sy ny sehatra rehetra ny fiovaovan’ny toetr’andro sy ny vokany.
Tsy lavitra amin’ireo voalaza ireo ny mpanao politika sy ny mpitondra ary ny olo-malaza. Manomboka ho tarafin’ny mpifidy sy ny mpanara-baovao ny zava-bita nandritra ny dimy taona, hijinja ny nafafy amin’ny taona 2018. Maro ny toky nomen’ny mpitondra ny vahoaka. Izany hoe, maro ny teny nafafy, saingy aoka ny tsirairay no mijery raha nisy vokatra na tsia tamin’ny fanatanterahana azy. Araka ny fiteny hoe: “Ny toky fitaka fa ny atao no hita”.
Azo tarafina amin’izao fotoana akaiky hifarana (efa-taona) izao ny vita. Ny hita aloha izao, tsy zakan’ny mpanjifa intsony ny vidin’ny kafe sy ny sakafo ilaina andavanandro.
Na izany aza, aoka tsy raisina ho tadio ity rivotra mangatsiaka mitsoka aty afovoan-tany ity, fa efa miditra tsikelikely amin’ny volon’andro ririnina mihitsy isika izao, toy ny isan-taona !